Nezve Isu - SYNMEC International trading Ltd.
Runhare: +86 311 67663887
Muchenesi wembeu & giredhi
Muchina Wekuchenesa & Kugadzira Mbeu
Elevator uye Conveyor
Bhinzi polishing machine
Midziyo yeMbeu yemurabhoritari
Mutsara Wokugadzira Mbeu
Chirimwa chekuchenesa zviyo nebhinzi
Chigadzirwa chekugadzira mbeu
Bhizinesi kubvira2002, yakavakirwa paHuaixi indasitiri park, Shijiazhuang Guta, China. Mukati memakore anopfuura makumi maviri ekutonga, tinove mugadziri akabudirira wepasi rose wekuchenesa zviyo & michina yekugadzira mbeu, uye hombe iChina, ine 11 hectare ivhu rine michina yekugadzira yepamusoro yakaita selaser cutter, CNC lathe, nezvimwe. Mugore ra2004, isu kutanga kutengeserana nedzimwe nyika, tichitevera makore mashanu tave nekukasira kusimudzira pane izvozvo, saka mugore ra2010 takavaka imwe mhando yepasi rose yekuchenesa zviyo & michina yekugadzira mbeu, takapawo mari kusangano rakazvimirira re'SYNMEC International trading Ltd.', iro rekupa kutengeserana kuri nani. sevhisi yemutengi wedu wemhiri kwemakungwa. Kusvika parizvino, takatengesa michina yedu kunyika dzinopfuura zana nemakumi matanhatu.
Mbeu mushure mekukohwa dzinenge dziine tsvina dzakasiyana siyana, seguruva, mashanga, dombo, ivhu, nezvimwewo. Mbeu inogona kuvhumba, kukuvara, kurwara uye kuvava, izvo zvinogona kusamera mushure mekudyara. Bhinzi dzine madhaka pamusoro izvo zvinoderedza mutengo wayo pamusika. Tine michina nemichina yekugadzira mbeu yakasimba, tsanga dzine utano nebhinzi dzakanaka.
Kuvaka muchina wekuchenesa zviyo mushure mekukohwa ngavaende kumusika vakasununguka, kuchenesa mberi kunobvisa mbeu inorasa simba, kuwedzera kumera kwavo, kukwenenzvera bhinzi kuita kuti kupenye wedzera mutengo wayo pamusika. Isu tiri chipangamazano chepamusoro pasi rose chekuchenesa zviyo & kugadzirisa mbeu. Tine boka rakasimba reinjiniya rine ruzivo rwakanaka, mainjiniya ese anokwira kakawanda, ziva zviyo zvako, ziva kusachena kwako, zvakare neyakakura chigadzirwa mhando, saka tinogona kupa imwe mhinduro yekusangana nebhajeti yako.
Bhizinesi rakatanga uye fekitari yakasimbiswa.
Ruixue Grain Selecting Machinery Co., Ltd. inotanga kugadzira michina yekuchenesa nekugadzira mbeu.
Tanga kutengesa kune dzimwe nyika
Yekukurumidza kukura nguva yemusika wekunze.
Isu takatanga SYNMEC International Trading Ltd. kuti ipe zvirinani zvekutengeserana sevhisi
SYNMEC inoshandira nyika makumi manomwe nenhanhatu, dzibatsire kuwana mbeu yakasimba, zviyo zvine utano, uye bhinzi dzakanaka, panguva imwe cheteyo tinosimudzira kuLevel B international trading company kuChina.
Fekitari itsva yakavhurwa iine mahekita gumi nerimwe evhu.
Kutengeswa kunze kwenyika dzinopfuura zana uye kukwidziridzwa kuenda kuNhamba A.
Nyika dzinopfuura zana nemakumi matanhatu.